के हो एरिया–५१, के एलियनबारे अमेरिकाले झूट बोलेकै हो त ?
अमेरिका । हाल अमेरिकाको प्रतिबन्धित क्षेत्र एरिया–५१ निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यससँग सम्बन्धित विभिन्न मिम भाइरल भएसँगै यसको चर्चा अझै चुलिएको छ । मुख्यतया, अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न रहस्य लुकाएर राखेको भन्ने हल्लाले एरिया–५१ बारे मानिसहरुको जिज्ञासा बढ्दो छ । जो यस क्षेत्रसम्बन्धी थोरै मात्र पनि जानकारी राख्दछन्, तिनीहरु यससँग सम्बन्धित रहस्यलाई पूर्णतया जान्न निकै लालायित छन् । तर, अहिलेसम्म एरिया–५१ बारे विभिन्न अड्कलबाजी लगाए पनि यो क्षेत्र यस्तै छ र यहाँ यही कार्य हुन्छ भनेर कसैले पनि सप्रमाण बताउन भने सकेको छैन ।
एलियनबारे अनुसन्धान !
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल इभेन्ट र मिम
त्यस्तै, ओसामा बिन लादेनलाई मार्न ब्ल्याकहक हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको थियो । बिन लादेनलाई मार्नुअघि उक्त हेलिकोप्टरको परीक्षण पनि यही क्षेत्रमा गरिएको बताइन्छ । यद्यपि, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले त्यहाँ गोप्य अनुसन्धान गरिने कुरा भने प्रमाणित गरेको छ । यूएस आर्मीले यहाँ डी-२१ नामक आफ्नो पहिलो ड्रोनको परीक्षण गरेको थियो ।
उक्त विमान करीब २५ हजार फिट उचाइमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र विमान चालक प्यारासुटको सहायताले विमानबाट झर्नुपर्यो । यो दुर्घटनापछि उक्त विमानको बारेमा जानकारीहरु लिक भयो । रुसी भूउपग्रहले उक्त विमान र विमानमा जडित प्रविधिबारे केही पनि थाहा नपाओस् भन्ने अमेरिकाको अपेक्षा थियो ।
यस घटनाले अमेरिकाले आफ्ना नवीनतम आविष्कार, प्रविधि, सैन्य योजना आदि यो क्षेत्रमा लुकाएर राखेकाले यस क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।
विभिन्न साइन्स फिक्सन चलचित्रमा यस क्षेत्रबारे चर्चा पाइन्छ । ती चलचित्रमा अमेरिकी सरकारले एलियनको अस्तित्वबारे सर्वसाधारणलाई सत्यतथ्य लुकाइरहेको देखाइएको छ । यसले पनि यस क्षेत्रबारे जानकारी राख्ने मानिसहरु त्यहाँ केही रहस्य लुकेको भन्ने कुरामा दृढ बनेका हुन् ।
यद्यपि, यस क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको स्पष्ट उद्देश्य भने अहिलेसम्म थाहा दिइएको छैन । भविष्यमा कुनै पनि सर्वसाधारणले यसको रहस्य जान्न पाउला कि नपाउला, यो अझै अनुत्तरित प्रश्न हो ।
एलियनको खोजीमा लागेका वैज्ञानिकले भेटे १०० भन्दा बढी संकेत
बेइजिङ (चीन) । एलियनको संसार खोजीमा ब्रह्माण्डको कुनाकुनामा खोजी गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षमा १०० भन्दा बढी संकेत प्राप्त गरेका छन् । चीनको नयाँ विशाल फास्ट नामक टेलिस्कोपले अन्तरिक्षमा ठूलो धमाकाको आवाज सुनेको
अमेरिका । हाल अमेरिकाको प्रतिबन्धित क्षेत्र एरिया–५१ निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यससँग सम्बन्धित विभिन्न मिम भाइरल भएसँगै यसको चर्चा अझै चुलिएको छ । मुख्यतया, अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा
सन् २०१९ मा जताततै एलियन देख्न पाइने टाइम ट्राभलरको भविष्यवाणी ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । एक जना सन् २०३० को टाइम ट्राभलर भएको दाबी गर्ने व्यक्तिले सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०१९ बारे रोचक भविष्यवाणी गरेका छन् । एजेन्सीहरुका अनुसार
एलियनहरु सूर्यको नजिक पुगेको संकेत मिल्यो !
हार्वर्ड युनिभर्सिटीका एष्ट्रोफिजिक्स सेन्टरले एलियन (अर्कै ग्रहका अनुमानित जीवहरु) र सौर्यप्रणालीबारे अनौठो खुलासा गरेको छ । अध्ययनअनुसार एलियनहरु सौर्यप्रणालीको ज्यादै नजिक पुगेको संकेत मिलेको छ । जसअनुसार दुई ताराहरुबीचको स्पेसमा